CUNNOOYINKA SORREL GOOSASHADA JIILAALKA - SORREL
Ugu Weyn Ee Sorrel
Hooyooyinka intooda badan waxay diyaariyaan sorrel jiilaalka iyaga oo u gaar ah, kuwaas oo aan had iyo jeer ha ilaaliyo caleemaha cusub iyo dhadhan fiican leh. Sidaa darteed, waxaan ka hadli doonaa siyaabaha sorrel goosashada jiilaalka, taas oo aan u baahnayn inaad ku qaadato waqti badan ama lacag badan.
Habka ugu sahlan ee waqtiga loo tijaabiyey si loogu diyaariyo sorrel jiilaalka waa qalajinta. Ku qallaji caleemaha labo siyaabood: hawada ama qalajiyaha korantada.
Ka dib markaad uruuriso, si taxadar leh u kala sooc caleemaha, ka saart gooyo ama la nadiifiyo. Biyo raaci biyo haddii boodh uu ku dego sorrel. Si aad u qallajiso sorrel ee hawada, waxaad u baahan tahay inaad soo ururiso cagaaran ee rucubyada yaryar, xir oo leh dhun qaro weyn oo ku dheggan ee hooska.
Waa muhiim! Iftiinka qorraxdu waa inaanuu ku dhicin sorrel, haddii kale caleemuhu waxay xoqan doonaan oo ay bilaabayaan inay googooyaan.
Markaad abuurayso shinbiraha, xusuusnow in caleemaha ay ku qallajinayaan isla sidaas. Haddii aad xirxirto xirmo oo aad u qaro badan, markaa sorrel ee xaruntu ma qalajin doono, laakiin way garaaci doontaa. Sidaa daraadeed, isku day inaad ku dhegto dhumucda 5-7 cm oo kale, sidoo kale, hubi socodka hawada fiican haddii caleemaha la qalajiyo gudaha gudaha.
Haddii qalajinta xidhmooyinka waa mid aan khafiif ahayn, caleemaha cagaaran waxaa lagu faafin karaa warqad ama shaandho. Xasuuso in lakabka lakirsan yahay, si dhaqso ah u qalaji doono. Xitaa haddii aad leedahay meel aad u yar oo qalajinta ah, waa suurtogal in la saaro sorrel ee lakabka ka weyn 15 cm, sida caleemaha ay u kala jajabi karaan.
Sorrel waa la qalajin karaa qalabka korontada. Habkani waa mid deg deg ah, laakiin maaha mid ku haboon qof walba. Ka hor inta qalajinta, sorrel waa in la jarjarey. Marka hore, isku day inaad yarayso qayb yar si aad u ogaatid inaad jeceshahay tayada iyo dhadhanka alaabta la dhammeeyey. Kadib dhowr isku-day ah, waxaad ogaan doontaa inta uu le'eg yahay caleemaha waa in qalajiyaha.
Sorrel qalalan ayaa diyaar u ah inuu noqdo cagaar madow. Marka la cadaadiyo, caleemuhu waa inay u kala baxaan qaybo yaryar. Xaaladdan, fiiro gaar ah u yeelo in caleemaha ay gebi ahaan qalalan yihiin ama ku dhow yihiin geesaha. Kadib qalajinta, dukaanka waxaa lagu hayaa qasacadaha opaque oo leh boog. Baaniyada waa in aan lagu meeleynin meel aad u qoyan si sorrel u sii xumaanayo (xitaa furka ugu dufan wuxuu u oggolaanayaa qoyaanka inuu u gudbo gudaha gudihiisa).
Waa muhiim! Waxaa habboon in la xuso oxalic acid, taas oo sii xumayn karta cudurrada kelyaha la xiriira. Dadka qaba acidillada sare ee caloosha waa inay sidoo kale cunaan soodhadh leh sorrel tiro yar.
Hooyooyinka intooda badan waxay ka fekereen sida loo ilaaliyo sorrel qaboojiyaha cusub. Sorrel qalalan ma laha qaboojin khaas ah ama dhadhan, sidaas darteed waxaad isku dayi kartaa inaad xakameyso caleemaha si ay u ilaaliyaan jilicsan iyo casiir leh. Ka hor intaan la qaboojin, kala saar soodhada si aad uga takhalusto cawska ama caleemaha dhaawacmay. Marka xigta, sorrel waa la dhaqaa biyo qabow waxaana lagu rusheeyaa daqiiqo biyo karkaraya. Sorrel way madoobaan doontaa, midabkeedu wuxuu noqon doonaa midab.
Waa muhiim! Isbedelka midabka ee sorrel ka dib biyaha kulul ma saameynayaan dhadhanka iyo walxaha fitamiinta.
Kadib markii lagu daaweeyo kulaylka, sorrel wuxuu u haray dhowr saacadood si uu u qalalo oo uu qaboobo. Haddii aad sorrel qoyan ku dhexjirto barafeeyaha, markaa waxaad la kulantaa baraf baraf ah oo qaadan doona meel dheeraad ah. Ka dib markii caleemaha qalalan, waxay u baahan yihiin in la balaariyo ee sudochki ama bacaha, kaas oo si fudud loo furi karo.
Markaad u baahato sorrel xilliga jiilaalka, waa in aadan iska jarin hore. In maraq ama borsch tuurin caleemo barafaysan oo dheeraad ah, taas oo si deg deg ah u dhalaalaan iyo siin saxankaada saxanka.
Waxaa jira hab kale oo lagu keydiyo oo loogu talagalay qasabadda loo baahan yahay. Caleemaha la jilciyey oo la dhaqay ayaa lagu jajabiyaa blender si gobolka gobolka baradho la shiiday, la dhigay ee sudochki iyo barafoobay. Nidaamkani waa mid yar dhib yar, sababtoo ah markaad dhalaaliso waa inaad isticmaashaa badeecada oo dhan. Sidaa darteed, sorrel la jajabiyey lagu ridi karaa in wax laga dhejiyo barafka. Sidaa darteed waxaad isticmaali kartaa sorrel barafeysan inta aad u baahan tahay.
Sorrel xilliga jiilaalka waa la qaboojiyey, ma aha oo kaliya in la ilaaliyo dhadhanka ama ka kooban hal-abuurka. Tani waxaa loo sameeyaa si loo hubiyo in caleemaha aan wax khasaarin (sida marka la qalajiyo) ama aysan ahayn mid cusbada leh (sida marka salting). Barafku wuxuu ilaaliyaa dhadhanka asaasiga ah ee sheyga, sidaa darteed ma cabsan kartid in badeecada la ilaaliyo ay khasaari doonto suxuunta.
Ma taqaanaa? Sababtoo ah content sare ee fareeshka ee sorrel, xididdada noocyada badan - qalab wax qaali ah oo loogu talagalay maqaarka tanning. Waxaa loo isticmaalaa sidii jaale iyo casaan.
Sarrel salkale ah
Awowgayaga ayaa sidoo kale ogaa sida loo kaydiyo sorrel: waayo tan waxay u cusbayn jiilaalka bangiyada. Habkani marnaba iskuma dayi doono, maadaama uusan u baahnayn dadaal badan ama nooc tiknoolaji ah.
Ka hor inta salting, qiyaas qadarka sorrel iyo diyaariyo bangiyada. Waxaa ugu wanaagsan in la soo saaro badeecada nus litir ama litir litir. Ka hor inta caleenta sorrel waa in la nadiifiyaa oo maydhaa. Haddii xaashiyuhu waaweyn yihiin, kala gooyee, laakiin yareeynin. Ka dib markii in, ku rid sorrel ee weel oo ku dar cusbo at heerka of 15 g oo cusbo ah halkii 0.5 kg oo sorrel ah. Walaaq caleemaha la jarjarey cusbo oo ha u istaagaan 2-3 saacadood.
Ka dib markii sorrel istaago oo ku rid juice, waa in la geliyo galay barmiil jeermis dilay. Baananka uma baahna inay is rogaan, kaliya ku adkee daboolka oo ku rid qaboojiyaha ama miiska.
Waxaan ka jawaabnay su'aasha sida loo kariyo sorrel. Hadda u sheeg xirfado dhowr ah markaad isticmaasho:
markaad sorrel ku daro saxanka, isticmaal 3 jeer cusbo yar;
Sulfil sorrel leh dill ama isbinaajka si isku mid ah si ay ugu raaxaystaan ​​"vitamin cocktail" xilliga qaboobaha;
ee salting, isticmaal sorrel dhalinyaro ah si ay badeecaddu u socoto muddo dheer iyo ilaaliso dhadhan.
Waa muhiim! Sorrel macmacaan ayaa lagu kaydin karaa ilaa 7-8 bilood meel qabow ah.
Sorrel ee casiirkiisa
Wax kale oo xiiso leh habka kaydinta cagaarka - in ay casiir u gaar ah. Faa'iidada qaabkan ilaalinta sorrel waa inaad adigu sameyn kartid adiga oo aan ku darin milix ama sonkor. Habkani wuxuu u fiican yahay suxuunta la diyaariyey si adag sida waafaqsan qadarka, iyo cusbada ama sonkorta dheeraadka ah waxay ku dhufan kartaa dhadhanka. Uma baahnid inaad gashato bangiyada ama karkariyo muddo dheer, sorrel sababtoo ah asiidheeda waxaa si quruxsan loo keydiyaa iyada oo aan lagu darin khal.
Marka hore waxaad u baahan tahay inaad soodhadh u diyaariso: ka saar caleemaha qallalan, ka saar cawska iyo qashinka kale, raaci boodhka iyo wasakhda. Qaado dheriga ugu weyn, buuxi biyo kala badh oo geli dabka. Diyaarsi nus litir (kiisaska ba'an - litir) dhalooyinka kuna buuxi caleemaha sorrel. Waxaad gooysan kartaa caleemaha ama aad gebi ahaanba gebi ahaanba, waxay kuxirantahay inta aad doorbidayso iyo xajmiga caleemaha.
Waa muhiim! Waxaa si xoog leh lagula talinayaa in ay isticmaalaan qasacadaha 0.5 litir ama 250 ml, maadaama ay ugu fiican tahay in ay sorrel ku jirto.
Ka dib marka aad buuxisid xabadaha, waxaad u baahan tahay inaad ku dhejiso dheriga biyaha. Sida ugu dhakhsaha badan sorrel oo hoos yimaada tallaabada heerkulku wuxuu bilaabi doonaa inuu "fadhiisto" -xiddo badan. Marka aad ogaato in casiirka sorrel uu u kaco qoorta weelka, geeddi-socodku waa dhamaystiran yahay. Gasacyada Sorrel waa in yar la qaboojiyaa waxaana lagu daboolaa kabaha silikoonta. Ka dib waxaad bangiyada ku gelin kartaa qaboojiyaha ama miiska.
Habkani ma qaadanayo waqti aad u badan oo ah ilaalinta caadiga ah. Ma cabsan kartid bangiyada "toogta" ama dufanka dhadhanka.
Sorrel Canning for jiilaalka
"Haddii badeecada la kariyey, waa in la qasacadeeyaa," - dad badan oo hoy u ah ayaa sheegi doona, waxayna noqon doonaan kuwo sax ah. Nidaamka ilaalinta sorrel qaboobaha jiilaalka ma aha mid aad u kala duwanaayo khudradda ama miraha, laakiin waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso astaamaha gaarka ah si aad u hesho caleemaha dhadhan fiican leh iyo casiir leh.
Si aad u bilowdo, u diyaari cagaasheena ilaalinta. Si arrintan loo sameeyo, nadiifi sorrel qashinka oo ku shub biyo qabow 20 daqiiqo. Tan waxaa loo sameeyaa si buuxda looga takhaluso wasakhda. Iskudhir barafaha oo ku rido shukumaanka, qoorta hoos u dhig. Sidoo kale, ha ilaawin wax-qabadka daboolka (5 daqiiqo oo aad u baahan tahay inaad buuxiso biyo keli ah). Ka dib markii aad dhaqday sorrel waa la jaraa oo ku rid dhalooyinka. Uma baahnid inaad gabi ahaanba iska tuurto afkoda - waxay ka kooban yahiin acid ka yar caleemaha, waxayna kaliya ka caawisaa ilaalinta.
Ka dib marka aad buuxiso xabadaha, waxaad u baahan tahay inaad ku shubto biyaha karkaraya sare iyo sii sii naqaska (sababtoo ah waxaad si fudud ku ridi kartaa qaadada ugu sareysa oo sug). Sida ugu dhakhsaha badan hawada oo dhan, u sii biyo qoorta oo ku duub daboolka birta.
Waa muhiim! Waxaad ku dari kartaa 1 tsp. cusbo, ka dib markii sorrel uu baddali doono midab. Saliidu ma saameyn doonto tayada waxqabad la'aanta ama nolosha shelf, haddii aad ku darto ama aanad ahayn waxa aad doorbidid shakhsi ahaaneed.
Waxaa jira hab kale oo lagu ilaaliyo habka fitamiinada. Dhammaan tallaabooyinka lagu soo celiyo sida kor lagu sharaxay, laakiin halkii biyo karkaraya, weel ku yaal sorrel waxaa ka buuxsamay biyo kulul ama qabow diiran. Ka dib markaa, ku dar 1 tbsp. l cusbo iyo 100 g oo khal ah (xisaabinta waxaa lagu fuliyaa weel dherer ah). Waxaa haboon in la ogaado in habkani aanu ku habboonayn dadka aan u dulqaadan karin cuntooyinka aadka u lihi.
Sorrel dabacsan leh cagaarka
Waxaad xajin kartaa sorrel leh geedo kale oo ku kora beertaada. Si aad u hesho fitamiin aad u weyn, waxaad ku dari kartaa dill, dhir iyo basasha cagaaran.
Ma taqaanaa? Sorrel waa dhiig-nadiifinta dhiigga, xannuunsanaan, wakiilka hemostatic, inkastoo xaqiiqda ah in aysan waligeed marna loo isticmaalin daawada sayniska.
Si aad u bilowdo, qaado qadarka ku filan ee sorrel, basasha cagaaran, dill iyo dhir beerta. Hal litir oo litir ah waxaad u baahan doontaa:
750 garaam oo sorrel ah;
180 garaam oo basasha cagaaran;
300 ml oo biyo ah.
Ku dhaq cagaarka, ka saar meesha qashinka iyo jarjar. Waxaan ku dhajino maaddooyinka digsi dhaldhalaalka ah, milix (1 tbsp L) oo ku shub biyo karkaraya. Waa in la kariyaa kuleylka hooseeya illaa 10-12 daqiiqo. Ka dib markii, isla markiiba gelin sorrel leh caleemo kale ee dhalooyinka iyo nadiifin 20-25 daqiiqo kale. Dhammaadka nadaafad-dhejisyada xayndaabee daboolka daboolka birta iyo ka tag si aad u diiriso biyo kulul.
Ogaanshaha sida loo diyaariyo sorrel guriga, waxaad awoodi kartaa wakhti kasta oo sanadka ah fadlan naftaada iyo qaraabadaada leh dhadhan fiican, iyo ugu muhiimsan, oo leh cufan caafimaad qaba.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Sorrel 2019